किन गर्छन बिदेशमा बारम्बार आ’त्मह’त्या ? – Kantipur Press
किन गर्छन बिदेशमा बारम्बार आ’त्मह’त्या ?
झण्डै 6:30 घण्टाको हवाइ उडान पश्चात लगभग4हजार किलोमिटरको दुरि पार गर्दै नेपालबाट एक्लै संघर्षको मैदानमा होमिने दृढताका साथ आफन्तलाई बिदाइका हात हल्लाउंदै बिरानो भुमिमा आफ्नो पाइला टेक्ने र परिवारको सपना देख्ने मान्छे त्यति कमजोरत पक्कैपनी हुंदैन तरपनी किन कोरियामा बारम्बार आ’त्मह’त्या गर्न पुग्छन नेपाली ?
१. श्रीमती वा गर्लफ्रेण्डले धोका दिइन ?
आफ्नो मान्छेले छोडेर जांदैन , जसले छोडेर जान्छ उ आफ्नो हुंदैन । उसोभय जो आफ्नो हैन उसको लागि तपाईं किन आफ्नो ज्यान दिनुहुन्छ ?
२. बाबुआमाले गाली गर्नुभो ?
जसले तपाइंलाइ यो संसारमा ल्याउनुभो , हुर्काउनुभो , बचाउनुभो उहांहरुसंग तपाइंलाइ गाली गर्ने पूरा हक छ । यो नभुल्नुस्की बाबुआमाको गालिमापनी आशीर्वाद लुकेको हुन्छ । तपाईं जब सानोमा औषधि खान मान्नुहुन्थेन त्यतिबेलापनी गाली गर्नुभयो , तपाईं जब सानोमा स्कुल जान मान्नुभयन त्यतिबेलापनी गाली गर्नुभो ।
तपाईं जब अल्लारेमा कुलतमा फस्न थाल्नुभो त्यतिबेलापनी गाली गर्नुभो । त्यही बाबुआमाको गालिनै थियो जसले गर्दा आजसम्म तपाईं जिबित हुनुभो , शिक्षित हुनुभो र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुभो । उहांहरु गाली गर्नुहुन्छ तपाइंकै सुन्दर भबिष्य निर्माणको लागि गर्नुहुन्छ ।
३. साहुले गाली /दु’व्यबहार गर्‍यो ?
तपाईं नेपालमा खानै नपायर बिदेश आउनुभयको पक्कै हैन । कोरियाको हकमा भन्ने हो भने मात्र3महिना काम गरेपनि आउंदा लागेको खर्च कटायर नेपालसम्म पुग्ने पैसा मज्जाले बचाउनुहुन्छ त्यसैले यदि कम्पनिमा केही नराम्रो व्यवहार हो भने शुरुमा कम्पनी परिबर्तन गर्नुस उस्तै परे नेपालनै गैदिनुस बरु । अहिलेपनी तपाइंलाइ तपाइंको परिवारले पर्खिरहेकोछ । तपाइंको घरको ढोकाले तपाईं खाली हातनै फर्केपनी स्वागत गरिरहेको हुन्छ ।
४. संगैको साथिले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो ? हेप्यो ?
त्यसो हो भने हेपाइ सहेर किन म’र्नुहुन्छ ? म’र्नु अगाडि प्रतिकार किन नगर्ने ? कम्पनी परिबर्तन गर्नुस , साहुसंग कुरा राख्नुस , सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुस । कानुनी रुपमा नमिले गैरकानुनी भयर काम गर्नुस । बेक्कार अर्काको कारण तपाईं आफू किन मर्ने ?
५. ऋण तिर्न नसकेर मर्ने बिचार आयो ?
यो नभुल्नुसकी तपाईं मरेपनी तपाइंको ऋण छोरानातिले तिर्नैपर्छ । तपाईं मर्दैमा तपाइंको ऋण मिनाहा हुंदैन । अब सोच्नुस के तपाईं आफुले गरेको ऋणको भारी छोरानातिको थाप्लोमा सुम्पेर आफुचाहिं कायरताको बाटो रोज्नुहुन्छ ? बांच्नुस , मेहेनत गर्नुस । जिन्दगिको अर्को नामनै संघर्ष हो ।
६ . डि’प्रेशनमा जानुभो ?
योचाहिं अलि जटिल समस्या हो तर कतिपयले शुरुवाती चरणमै आफैले डि’प्रेशन महशुस गर्न सक्छन । यदि शंका लागेमा मनोचिकित्सकको परामर्श लिनुहोला । यस्तो ब्यक्तिको कम्पनिमा साथिभाइहरुपनी छन भने कृपया यसमा उहांहरुलेपनी ठूलो भुमिका निर्बाह गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले समस्या बुझेर त्यसै अनुरुप व्यवहार गरिदिनुहोला र जाने बुझेसम्मको परामर्श दिनुहोला ।
आ’त्मह’त्या कहिल्यै समाधान हुंदैन । मर्नेले उन्मुक्ती पाउला तर बांच्नेले त्यसको पीडा सदा झेलिरहनुपर्छ । आ’त्मह’त्या गर्नेलाइ परिवारले श्रद्दान्जलित देलान तर माफी कदापी दिंदैनन । किनकी मान्छे त्यस्तो प्राणी हो जसको जिबनसंग अरु कैयौंको जिबनपनी जोडियको हुन्छ त्यसैले हिम्मत नहार्नुस ।
अरुको लागि सक्नुहुन्न भने आफ्नो लागि बांच्नुस , आफ्नो लागि सक्नुहुन्न भने अरुको लागि बांच्नुस तर आ’त्मह’त्या चाँही कदापी नगर्नुस।
एनआरएनए दक्षिण कोरियाको पहलमा दक्षिण कोरियाले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने
दक्षिण कोरिया मास्क फ्रि कन्ट्री बन्दै !